China 3-Layer Anti-bacterial Disposable Face Mask(Stamping) Mmepụta na ụlọ ọrụ |Shuer
3-Layer Anti-bacterial Mask Face (Stamping)
Ụdị: 3-ply, Loop ntị, Mpempe imi agbakwunyere, anaghị adị ọcha, akara stampụ
akwa na-abụghị nke a kpara akpa(Dewatering)+Agbazere(fitilteration)+ákwà na-abụghị kpara (akpụkpọ anụ enyi na enyi)
built-na imi akwa
underway , ụgbọ ala , ọdụ ụgbọ elu , ogige , ịzụ ahịa nnukwu ụlọ ahịa , okporo ámá na-arụsi ọrụ ike
Ịwa ahụ masks iso nke nkpuchi ahụ na ikesiike na belt, nke masks ihu ahu kewara n'ime, n'etiti na elu oyi akwa na n'ime oyi akwa maka nso akpụkpọ ihe (nkịtị ike gauze ma ọ bụ na-abụghị kpara), n'etiti ikewapụ nyo oyi akwa (superfine gbazee). -fụ polypropylene eriri ihe oyi akwa), mpụta oyi akwa ihe maka pụrụ iche antibacterial oyi akwa (na-abụghị kpara ma ọ bụ ultrathin polypropylene agbaze ihe oyi akwa).
Ihe mkpuchi mkpuchi ahụike dabara adaba maka ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ metụtara nke ikuku na-efe efe na-efe efe nke ikuku, bụ ụdị ihe nzacha nke mechiri emechi nke onwe ya, ụdị nchekwa nchekwa ahụike, ọkwa nchekwa dị elu, dabara adaba maka mmemme ụlọ ọgwụ site na ikuku ikuku ma ọ bụ nso nso. Ndị ọrịa nwere ọrịa iku ume na-ebufe site na ụmụ irighiri mmiri mgbe ọ na-eyi.Ọ nwere ike nzacha ụmụ irighiri ihe dị n'ikuku, gbochie ụmụ irighiri mmiri, ọbara, mmiri ara, ihe nzuzo, wdg. Ọ bụ nke ngwaahịa ndị enwere ike iwepu.Ihe mkpuchi ahụike na-egbochi ọtụtụ nje bacteria, nje na nje ndị ọzọ.Òtù WHO na-atụ aro ka ndị ọrụ ahụ ike na-eji ihe na-eku ume na-egbochi particulate iji gbochie nje na-efe efe na ikuku ụlọ ọgwụ.
Nke gara aga: Ihe mkpuchi ihu 3-Layer Anti-bacterial Disposable Face Mask (Plain)
Osote: 3-Layer Anti-bacterial Mask nke a na-atụfu (Spunlace)
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Igwe iku ume FFP2, Ihe mkpuchi mkpuchi China, Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe mkpuchi China, Ihe mkpuchi ihu, Ihe mkpuchi PPE,